Titanium yakasviba Vatengesi uye fekitori - China Titanium yakasviba Vagadziri
Tsananguro yechigadzirwa: MYR-505 imhando yerutile titanium dioxide, inorapwa nemakemikari akasanganiswa, akafukidzwa nesilica uye aluminium oxide. Iyo ine yakanyanya mamiriro ekunze kusagadzikana, kuderera kwemafuta, kupararira kwakanaka, simba rekuhwanda rakanakisa, yakanaka kuyerera kuita kwehupfu hwakaoma.
Rutile titanium yakasviba 606
Tsananguro yechigadzirwa: YMR-606 iri rutile titanium dioxide, iyo yave iri organic pamusoro yakarapwa uye yakaputirwa nesilicon aluminium oxide. Ichi chigadzirwa chine kuchena kwakanyanya, kwakanyanya kusaoneka, simba rakakura rekutepa, yakasimba mamiriro ekunze uye gloss.
Anatase titanium yakasviba 110
Tsananguro yechigadzirwa: YMA-110 ndeye general-chinangwa anatase titanium dioxide. Ichi chigadzirwa chine kubwinya kwakanaka, kuchena kwakachena, kushomeka kwemafuta mashoma, simba rakakora rekuparadza, yakakwira yekupararira coefficient, kupararira kwakanaka, kushomeka kwakasviba zvemukati, yunifomu uye yakatetepa inoyera saizi yekuparadzira.